JOS Nepal » जनताको गाऊ बस्ती बाट प्रचण्ड केपी लाई शालिन र सभ्य चिठ्ठी
काठमाडौं । जनताको गाऊ बस्ती बाट प्रचण्ड केपी लाई शालिन र सभ्य चिठ्ठी…. यस प्रकार छ । आफ्नै नेपाली दाजु भाई एक आपसमा यसरी लडाएर प्रचण्ड तपाईले आफ्नो सत्ता पायौ सुनको गार्बिलो कुर्षी पायौ एक अर्थले श्रिपेच को ठाऊमा कालो ढाका टोपी पायौ। एक राजाको ठाऊमा दशौ हजार छोटे महाराजहरु पाए। प्रचण्डको आलिशान त्यो जिन्दगी तिनका आसेपासे नेताहरुको त्यो लवाई खवाई अनि जीबनशैली हेर्दा लाग्छ तिनीहरु डोनाल्ड ट्रम्प को देशमा छन । असी देखी पाच करोड सम्मको गाडी अनि बंगला अनि आठ दश लाख मासिक भत्ता सयौ गाडी र पजेरो हेर्दा लाग्छ ऊहाहरु त बिश्वकै टप धनीहरु हुन जसलाई अमेरिकी फ्रोब्स म्यागजिन ले निकाल्ने धनीहरुकै सुचीमा नआऊलान भन्न सकिन्न ।
तर यि महान योद्धाहरुले के पाए ? आज कोई अरब तिर कोई गाऊ घर तिर तड्पिएर कोई अ*पागं छन कोई बे*पत्ता, बेखबर, बेहाल बिक्षिप्त छन कोई प्रतिबन्दित छन कोई जे*लमा छन कोई मा*रिदैछन । कसैलाई कम्युनिष्ट बिप्लब समर्थक भन्दै भटाभट पक्रिदै जे*ल हालिदै छन। हजारौ लाई अयोग्यको बिल्ला भिराएर, हजारौ जनसेना, कार्यकर्ताहरुको परिवार मा बेहाल भताभूग र घर न घाटको नारकिय जिबन पारिएको छ । जनबादी राज्यसत्ता निर्माण का लागि भन्दै सत्र हजार आमाहरुको कोख रित्ताए, सर्बाहारा बर्गको राज्य आऊछ भन्दै गरिब जनताका लालाबाला सन्तानहरु लाई खोसेर लिए ।
जनबादी शिक्षाको नाममा स्कूल कलेज भत्काईए। पढ्न लागेको कलिलो बिद्याथ्री छोरीहरु लाई ब*न्दुक दिलाएर आफ्नो छोराहरु लाई अमेरिका बेलायत र भारतका ऊच्च बिश्वबिद्यालयमा पढाए । तर ति पढ्न बन्चित भएका छा*पामार र कार्यकर्ताहरु आज बेरोजगार अभाब र अशिक्षित मान्छेको ट्याग् बोकेर अपमानित हुदै हिड्नु परेको छ । प्रचण्ड, प्रभाकर, पासाङ, महरा, बादल, पम्फा, शक्ति बस्नेत देखि मातृका सम्मले कुनै दिन नेपालको एक नं करोडपति बिनोद चौधरीलाई नि फ्लप पार्नेछन अच्चम नमाने हुन्छ । अच्चम त यहा छ ? प्रचण्ड लगायत नेताहरु, कमरेड कहलिएका नेताहरु धन सम्पत्तिको आयश्रोत के हो ? एक दुई कठ्ठा जग्गा पनी पार्टीमा बुझाईसकेका प्रचण्ड ले सिंगापूरको टप होटेलमा बस्नु र टप हस्पिटलमा ऊपचार गर्ने लाखौ करोडौ पैसा कहा बाट आयो ? प्रचण्ड ले अख्तियार डामाडोल पारेर त्यहा भित्रको आयुत्तहरु क*ब्जा गर्नुको रहस्य के हो ?
जनमुक्ति सेना बाट ऊठाएको प्रतिब्यत्ति छ देखि दश हजार रुपिया का दरले करोडौ रुपिया कता गायब गरियो ? ज*नयुद्धमा क*ब्जा गरिएको बैंकहरुको करोडौ रुपिया पार्टी सदस्य लाई दिईएन र कसैले पनी देख्न पाएनन त्यो आर्थिक हिनामिना कसले गर्यो ? डा. बाबूराम कै भाषामा प्रचण्डले स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गरेका छन । करोडौ अरबौ रुपिया छलछाम गरेका छन, भन्दैछन त्यो खास कुरा के हो ? हिजो पेट सुकेका नेताहरु आज तिन फिट को भुडी देखाएर हिड्नु, हिजो चप्पल लाएर राजनीति शुरु गरेका महासयहरु आज ३७ हजार पर्ने बुट जुत्ता लाएर पॅजेरो भित्र सयर गरेको देखिनु ले के संकेत गरेको छ ? यदि यही अबस्था देख्नु थियो भने ज*नयुद्ध गरेको गलत थियो प्रचण्ड कमरेड ?
आफ्नै ईतिहास मेटेर, बिप्लब माथी प्रतिबन्द लाएर, आवज लाई दबाएर, शहिद लाई भुलेर, बिस्तृत शान्ती सम्झौता लत्ताएर के को समृद्धि आऊला के को समाजबाद आऊला प्रचण्ड कमरेड ? हिजो दश बर्षिय ज*नयुद्धका पिडित सबैलाई न्याय नगरेर कोरिएको कोख्रो संबिधान को ऊन्माद र आडम्बर शक्ती रबैयाले केको सुख र शान्ती ल्याऊला र ? माईला लामाहरु जेल हालेर कुमार पौडेलहरु को परिवार तहसनहस पारेर के को गणतंत्र स्थापित होला र ?आजीबनको लागि भत्ता पाए तर गरिब जनताको लागि सत्ता ल्याऊन दिएनन र बिचैमा क्रान्ती छोडेर कुलेआम ठोके ?यदि प्रचण्डले केपी ओली सॅग काध जुधाऊनु थियो भने त्यो सत्र हजार जनताको रगत को होली खेलेकै हुन ।
हजारौ आमा बाहरुको श्राप अबस्य लाग्नेछ भगौडा धोकेबाज नेताहरुलाई । प्रचण्डको पछी पछि कुद्ने झोले अंरिगालहरु त रातारात करोडपति बन्दैछन । हिजो आएका बेलाचे अल्छिको डम्पुक र ज*नयुद्धका कायरहरु अनि ज*नयुद्ध लाई घृणा गर्ने चैत्तेहरु आज प्रचण्ड पार्टी भित्र हर्ताकर्ता भएका छन। प्रचण्डका आसेपासे र संसोधनबादी गुलामहरु अनि राजनैतिक नैतिकता र कम्युनिष्ट आचरण प्रबृति र कार्यशैलि बाट च्युत भाका दलाल हरु आज कोई मेयर, कोई सासंद, कोई मंत्री छन कोई मुख्यमंत्री छन कोई हाकिम छन कोई हेडमास्टर छन कोई ठेगेदार छन । तर ईमान र ईज्जतका साथ ज*नयुद्ध र जनक्रान्ति मा होमिएका महान सपुत माईला लामा हरु जे*ल भित्र छन ।
जबर्जस्ती गलत मु*द्धा लाएर देश बाट क्रान्तिकारी सिद्धाऊन तिनै फाशिस्ट दलालहरु कम्मर कसेर लागेका छन। हिजो गणतंत्र लाई बयलगाडाको संज्ञा दिएर मिडियामा मजाग गर्ने अनि माओबादी लाई आतंककारी भन्ने केपी ओली यो देशको हाकिम छन। तिनै हाकिमको दाहिने हात बनेर प्रचण्डहरु तिनका झोले अंरिगालहरु आफ्नै ईतिहास मेट्न र क्रान्तिकारीहरु माथि नि*र्मम क्रुर र फाशिष्ट बन्दै कम्मर कसेर जनदमन मा आईरहेका छन । कस्तो बिडम्बना है____? जुन योद्धा बिप्लबहरुले गणतंत्र ल्याऊन यत्रो ब*लिदान गरे आज ऊनै बिप्लबहरु प्रतिबन्दित छन्। ऊनै बिप्लबहरु ले ऊठाएको शान्तिपुर्ण दबाब आन्दोलन माथी जबर्जस्ति युद्ध थोपारेर आफुहरु करोडपति बन्ने दाऊमा छन अर्बौको भ्रष्टाचार गरेर देशलाई फिजी रुवान्डा हाईटी अफगानको जस्तो बनाऊन प्रत्यनशील छन ।
अन्तमा प्रचण्ड कमरेड ।१ बिप्लब माथीको नाजायज अबैधानिक प्रतिबन्द फुकुवा होस । साथै बिप्लब नेकपा सॅग प्रतिस्पर्धा गर्न नडराऊनुहोस् ।२ बैज्ञानिक समाजबाद ब्यबस्था का लागि बर्तमान संबिधानसभा खारेज गरि गोलमेच मार्फत नया जनसंबिधान घोषणा गरियोस् । ३ जनतंत्र जनजीबिका, राष्ट्यिता र शान्तीका लागि गरिएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता अक्षरस पालना गरियोस् । ४ महान ज*नयुद्ध लाई सम्मान गरियोस श*हिद घाईते अपागं पिडित परिवारजन लाई ऊचित न्याय दिलाईयोस् । ५ गरीब सर्बाहाराबादीहरुको हित अनकुल राज्य पुनर्सरचना गरियोस् । ६ बैज्ञानिक भुमीसुधार गर्दै किसान को सतप्रतिशत माग पुरा गरियोस् । ७ राज्य पीडित र ऊपेक्षित मुक्तिकामी श्रमजीबि पेशाकर्मीहरुको माग सम्बोधन होस । ८ गरिब जनताको घर बास बनोस । ९ संबैधानिक अंगहरु पुनसंरचना गरियोस् ।
१० सेना न्यायलय र प्रशासन सुधार मा ऊचित सम्बोधन होस । ११ मालपोत भन्सार टेलिफोन यातायात बिधुत सडक देखि स्वास्थय समस्याहरु को ऊचित सम्बोधन होस । १२ बर्ग बिहिन राज्य ब्यबस्था ऊन्मुख समाजबाद षाम्यबाद घोषित गरियोस । १३ भारत सॅग गरिएका असमान सन्धी सम्झौता र राष्टघातहरु खारेज गर्दै सिमानामा पर्खाल लाऊदै सिमाको सुरक्षा गरियोसू । १४ यि लगायत बिप्लब नेकपा ले राखेको सबै मागहरु, डाक्टर गोबिन्द केसीका मागहरु पुरा होस् । १५ नृमला पन्त लगायत थुप्रै दिदीबहिनीहरुको हत्यारा सार्बजनिक देखि, सुनकाण्ड वाईडबडी बिमान घोटाला, एनसेल देखि टेलिकम फोर्जी र आयल मालपोत घोटाला लगायत दोषी लाई कडा कार्बाही गर्दै बालुवाटार जग्गा काण्डका दोषीहरु सार्बजनिक गरियोस् ।
तर यि सबै जनताका आवजहरु प्रम केपी ओली ले बेवास्ता गर्ने भएकाले र पुरा गर्न असक्षम र ऊदासिन देखिएकाले नैतिकता र असफलताका आधार तत्काल राजिनामा दिएर गोलमेच सभा मार्फत नया राष्टिय सरकार गठन गरियोस । अन्यथा जनता अब जागीसके आवजहरु जति प्रतिबन्दित भएपनी जती दबाईएपनी जती दमन गरेपनी यो एक्काशौ शताब्दी ईट को जवाफ पथ्थर दिन जनता तयार छन । जो जो भ्रष्टचारको बिरोध गर्छ चाहे बिप्लब हुने चाहे रबि हुन चाहे ज्ञानेन्द्र शाही हुन चाहे रेखा थापा हुन चाहे सुरेन्द्र केसी हुन चाहे Nara Bahadur Karki हुन चाहे कोई हुन ।
सरकार को गलत कुराको भण्डाफोर गर्दा बित्तिकै क्रुर दमन गरिहाल्छ । ऊसलाई सिद्धाऊन देशको सारा शक्ति परिचालन गर्दैछन । आफ्नो लुटबाजी छलछाम लुकाऊन र अनेक जालझेल तिकडम गर्न मिडिया अंकूश लाऊदैछन ।राष्ट्र नदिनाला भारत लाई बेचेर आफ्नो सत्ता टिकाऊन दिनरात लागेका छन । अन्तिम कित्ता मा देश धुर्बीकृत हुदैछ । नक्कली कम्युनिष्टहरु एका तिर असली कम्युनिष्टहरु बिप्लब तिर गोलबन्द हुने क्रम जारी छ । अन्तमा बिजयी सत्यबादी कै हुन्छ। जनतालाई माया गर्ने कै हुन्छ । बिज्ञान को जित हुन्छ, श*हिदहरु अमर रहुन । एडमिन : बिश्लेषण बिप्लब फ्यान क्लब काठमान्डु लेन्डपहरु मु*र्दाबाद ।